Vazhinji vedu mutakurwi kuverenga system zviri patent zvigadzirwa. Kuti tidzivise kubiridzira, hatina kuisa zvakawandisa pawebhusaiti. Unogona kutaura nevashandi vedu vekutengesa kuti vakutumire ruzivo rwakadzama nezve yedumutakurwi kuverenga system.
HPC088 mutakurwi kuverenga system yakakwira-chaiyo (98% +) yevatakuri kuverenga chigadzirwa chebhazi mutyairi otomatiki kuverenga zvichibva pane binocular stereo yekuona tekinoroji uye nehungwaru vhidhiyo yekuongorora tekinoroji. Iyo binocular kamera yeiyomutakurwi kuverenga system yakagadzirirwa neyakagadzirwa nevanhu-seinjiniya dhizaini inounganidza chaiyo-nguva yevanofamba inofamba ruzivo mukati memusuwo, uye nekukurumidza inoverenga iyo 3D data yeiye anotora mutyairi kuburikidza neyekufananidza processor, kusanganisira iyo yekukwira mutakurwi \_ upamhi hwepfudzi, nezvimwe, izvo zvisingaenderane kune hunhu hwevanhu Kuzvipepeta kwazvino kwezvinhu zvakanangwa (senge trolleys, zvinhu, nezvimwewo) zvinogona kuzadzikiswa zvakafanana-kunyatso tarisa zvisinei kuti zviri muzuva kana munzvimbo isina kusimba.
HPC088 mutakurwi kuverenga system ine RS232, RS485, maviri marudzi e data interface, zviri nyore kwazvo kusangana nevechitatu-bato masystem kuti aone kudyidzana kwedata.
Iyo binocular kamera yeiyo mutakurwi kuverenga system inotora dhizaini yemaziso yemunhu, yakavakirwa-mukati maviri maCMM makamera kuti atore 3D mifananidzo yechinangwa, uye unganidza chaiyo-nguva vhidhiyo hova nekumhanyisa kwemakumi maviri neshanu masekondi. Iyomutakurwi kuverenga systemine anti-shake basa uye inokodzera kwazvo kushandiswa munzvimbo yebhazi. Inogona kungojeka yakajeka maererano nemamiriro ekunze Iko kusimba kweiyo infrared yekuwedzera mwenje inogona kushandiswa zvakajairwa masikati kana husiku.
Iyo processor processor yeiyo mutakurwi kuverenga system ine yakavakirwa-mukati-inoshanda-giraidhi yakatsaurirwa DSP processor, iyo inogadzirisa vhidhiyo inoyerera ruzivo rwema binocular makamera munguva chaiyo maererano neyakagadzirirwa grafiti algorithm, inoverenga iyo chaiyo-nguva nhamba yevatakurwi mukati uye kunze kwemikova miviri ye bhazi, uye inotaurirana neyechitatu bato kuburikidza neRS232 uye RS485 maficha Iyo sisitimu inoitisa kuchinjana kwedata.
Iyo processor processor inogona kuvakwa-mukati GGM module (sarudzo), iyo inogona kuona iyo GPS kumisikidza mabhazi uye 3G \_ 4G network data kufambisa, saka iyo mutakurwi kuverenga system inogona kuumba yakazara data muunganidzwa, dhata kufambisa, kumisikidza mota basa, uye nekukurumidza kutumirwa kwemaapplication.
Iyo mutakurwi kuverenga system processor yakaiswa munzvimbo yakavanda yedenga rebhazi. Kana iyo GGM module ikashandiswa, iyo GPS \_ GPRS kanyanga inofanirwa kuiswa munzvimbo iyo chiratidzo chinogamuchirwa zvakanaka.
MRB otomatiki mutakurwi pakaunda vhidhiyo
Tine mhando dzakawanda dze IR mutakurwi kuverenga system, 2D, 3D, AI mutakurwi kuverenga system, panogara paine imwe inokukodzera, ndapota taura nesu, isu tinokurudzira iyo yakakodzera kwazvo mutakurwi kuverenga system zvako mukati memaawa makumi maviri nemana.
Pashure: MRB otomatiki mutyairi pabhasi HPC168
Zvadaro: MRB Mobile DVR yemotokari
Otomatiki Passenger Counter
Yekugara Yekutarisa Mota
Passenger Counter Yemabhazi
Passenger Kuverenga Sensor